ခဲပုံစံများသေရသည့်အကြောင်းရင်း ၇ Martech Zone
ဒီဂျစ်တယ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်အုတ်နှင့်မော်တာစတိုးဆိုင်များနှစ်မျိုးလုံးသည်အသစ်သောဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကို ဦး ဆောင်သူများကိုပိုမိုဖမ်းယူပြီးဖောက်သည်များထံပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဤသည်မှာကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကစက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုပြင်းထန်စေသည်။
နှစ်များတစ်လျှောက်လုံးတွင်လက်လီရောင်းချသူများကစိတ်ဝင်စားသူများသည်၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သူတို့၏ဆက်သွယ်ရန် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်“ Contact Us” ပုံစံများကိုရောင်းချလိမ့်မည်။ ဤ“ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ” ပုံစံများကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများက“ Static Lead Forms” ဟုခေါ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-၁၅ နှစ်လောက်ကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာအရင်တုန်းကလောက်ထိရောက်မှုသိပ်မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ငါအဖြစ်ဝေးပြောပါလိမ့်မယ် သူတို့တော်တော်လေးသေပြီ.
အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့မီဒီယာတွေဟာလက်လီအရောင်းဆိုင်တွေ (ဒီဂျစ်တယ်ရောအုတ်နဲ့မော်တာနှစ်ခုလုံး) ကြားမှာပိုပြီးလူကြိုက်များလာပြီး၊ ခဲပုံစံတွေလိုအပ်ချက်ကိုအလျင်အမြန်အစားထိုးလိုက်တယ်။ သို့တိုင်၊ သင်သည်လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည် static lead ပုံစံများကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းတို့အားအဘယ်ကြောင့်သေသည်ဟုမှတ်ယူသနည်း။
ဤနေရာတွင်ခဲပုံစံများသေရသည့်အကြောင်းရင်း ၇ ခုရှိသည်။
၁။ Static Form များကိုမည်သူမျှမဖြည့်လိုပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း static ခဲပုံစံများသည်အလှဆင်ခြင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်လာသည်။ မည်သူမျှ ဦး ဆောင်ပုံစံများကိုတော့ဘူးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအာရုံမစိုက်; နှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ထိုစားသုံးသူသူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တင်ပြခြင်းမှတန်ဖိုးဘာမှလက်ခံရရှိကြသည်မဟုတ်။ သူတို့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြပြီးနောက်၎င်းသည်တွင်းနက်ထဲသို့ ၀ င်သကဲ့သို့…အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး က၎င်းတို့အားခေါ်ဆိုသည်အထိဖြစ်သည်။
စားသုံးသူများကသူတို့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြပြီးနောက်ကုမ္ပဏီမှတစ်စုံတစ် ဦး သည်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ယခုငါမကြာခဏအွန်လိုင်းစျေးဝယ်အဖြစ်တစ်ခုခုသင်ယူခဲ့လျှင်, ဒီပုံစံများ၏စစ်မှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာသူတို့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်ရရှိရန်နှင့်သူတို့ကိုတစ်ခုခုရောင်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ကြသည်, တခါတရံသူတို့မဟုတျပါ။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုခဲပုံစံကိုလိုလိုလားလားဖြည့်စွက်သောစားသုံးသူအများစုသည် ၀ ယ်ယူသည့် (သို့မဟုတ်သုတေသနအဆင့်တွင်) ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် ၀ ယ်ရန်မလွယ်ကူသေးပါ။
အဲဒီမှာ ခဲ့ ခဲခဲပုံစံတစ်ခုကိုဖြည့်စွက်သည့်အခါအချိန်ကာလတစ်ခုသည်စားသုံးသူများအနေဖြင့်ထပ်ဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရရန်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော်အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှသုံးစွဲသူများသည်သူတို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုရွေးချယ်လာကြသည်။ စားသုံးသူများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ထိုသုတေသနကိုလုပ်ရန်အချိန်ယူကြသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာနေသေးတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းရောင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံများ (သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ခဲပုံစံများ) သည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ခဲဖမ်းယူရန် ဦး စားပေးသောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်တည်ငြိမ်သောခဲပုံစံများကိုအလျင်အမြန်ကျော်တက်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်အဖြေများကိုရရှိရန်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်နှစ်ဖက်ပါ ၀ င်မှုရှိသောစကားလက်ဆုံပြောဆိုခွင့်ကိုခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်စားသုံးသူတစ် ဦး သည်ပရိဘောဂများကိုမဝယ်ယူမီသူတို့၏အခြေအနေအတွက်မည်သည့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိလိုသည်ဆိုပါစို့။ တန်ဖိုးရှိသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဥပမာကောင်းတစ်ခု စားသုံးသူကိုအကဲဖြတ်တဲ့အကဲဖြတ် တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့် (သူတို့ပေးသောထူးခြားသည့်သတင်းအချက်အလက်အပေါ် အခြေခံ၍) ၎င်းတို့အားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အချက်ကို ဦး တည်သွားတယ်။
တည်ငြိမ်သောခဲပုံစံများနှင့်မတူဘဲအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံများသည်စားသုံးသူများအားသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်စကားပြောဆိုခွင့်ပြုသည်။ “ ကွက်လပ်ဖြည့်” မည့်အစား (အမည်၊ အီးမေးလ်၊ ဖုန်း၊ မှတ်ချက်များ) စကားဝိုင်းသည်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှုန်းသည်များသောအားဖြင့်တည်ငြိမ်သော ဦး ဆောင်ပုံစံများရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များထက်များစွာပိုများသည်။
အသုံးအများဆုံးအပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံအမျိုးအစားများတစ်ခုမှာအကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကဲဖြတ်မှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်စားသုံးသူများအား၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ရန်နှင့်သူတို့၏လက်ရှိပြproblemနာအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဖြေတစ်ခုပေးရန်ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကိုမေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စားသုံးသူတစ် ဦး သည်တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးမည်သည့်အထပ်အစီအစဉ်နှင့်သူတို့သွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည် (ရွေးချယ်ရန်များစွာရှိသည်) ဆိုပါစို့။ ဤအချက်သည်အလားအလာရှိသောငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက်ပုံမှန်ပြproblemနာဖြစ်သည်။ ဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်စားသုံးသူ၏ယုံကြည်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းမှာကြမ်းပြင်စီမံကိန်းအကြံပြုချက်များကိုပေးသည့်အကဲဖြတ်မှုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံအရဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သက်ဆိုင်သောရွေးချယ်စရာမေးခွန်းများစွာကိုမေးလိမ့်မည် (ဥပမာ -“ မင်းမိသားစုမှာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ။ မင်းမှာကလေးတွေရှိသလား။ မင်းမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြီးများရှိသလား။ ”) နှင့်စားသုံးသူမှရရှိသောအဖြေများကနိဂုံးချုပ်လိမ့်မည်။ ။
ယခုတွင်သင်သည်သုံးစွဲသူများသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်စကားပြောဆိုနိုင်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်မေးခွန်းများမေးသည်။ စားသုံးသူသည်ထိုမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများဖြင့်ဖြေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စကားဝိုင်းသည်ပုံစံတစ်ခုကိုဖြည့်စွက်ခြင်းထက်အနည်းငယ်ပိုကြာသောကြောင့်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုကြာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စားသုံးသူအားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးပြီးနောက် (အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါသော ၁.၅ ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်၏ရှင်းလင်းချက်ကိုပြောရန်ဆိုပါစို့) သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်စားသုံးသူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၌ နေ၍ လုပ်လိုသည်မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။ ကြောင်းဖြေရှင်းချက် (သို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်အစီအစဉ်, အစား) အပေါ်အနည်းငယ်ပိုသုတေသန။ တည်ငြိမ်သောခဲပုံစံများသည်ချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်မပေးနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကမခေါ်မချင်းသင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာစားသုံးသူတစ်ယောက်ဘယ်လိုနေရမှာလဲ။ ထို့ကြောင့် static lead ပုံစံများရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်များသောအားဖြင့် ပို၍ နိမ့်သည်။
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရှေးရှေးငြိမ်ခဲပုံစံများကိုဖြည့်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြပါ။ တနည်းကား၊ သူတို့၏သတင်းအချက်အလက်သည်မသိသောပျက်ပြယ်သို့ရောက်သွားသည် (၎င်းတို့သည်အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး ၏အမှတ်အသားဖြစ်သည့်အထိ) မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောသူတို့နှင့်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြပြီးသောအခါသူတို့သည်တန်ဖိုးရှိသောအရာများကိုချက်ချင်းမရရှိကြပါ။ စားသုံးသူတွေဟာလှည့်စားခံနေရသလိုခံစားရတယ်။ သူတို့ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကတိပေးထားတယ်၊ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ငြိမ်ခဲပုံစံများကိုမဖြည့်တော့ခြင်းဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောအတွေ့အကြုံများအဘယ်ကြောင့်ဤမျှအောင်မြင်ရသည့်အဓိကအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့ကတိပြုနိုင်သောကတိများကိုပြုလုပ်ခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေမည့်အစားမိနစ်ပိုင်းအတွင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရနိုင်သည်။ အကယ်၍ စားသုံးသူများအားချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်ပေးရန်အာမခံထားပါက၎င်းတို့သည်အတွေ့အကြုံကိုစတင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအတွေ့အကြုံကိုဖြည့်စွက်ပြီးစားသုံးသူတစ် ဦး ထံမှအပြည့်အဝ ဦး ဆောင်လမ်းပြအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ စားသုံးသူများကသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးကိုသူတို့ရဲ့ပေးဆပ်ရန်အခြားလူတစ်ယောက်ကိုမစောင့်လိုပါဘူး၊ ပြီးတော့တိုက်ခန်းရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမှာမလိုအပ်ဘဲဈေးကြီးသောကြမ်းပြင်ကိုမရောင်းလိုကြပါ။ စားသုံးသူများသည် ၀ ယ် / ငှားရမ်းခြင်းအဆင့်သို့မ ၀ င်မီကြက်ဥကိုအိတ်တစ်လုံးထဲထည့်သည်။
စားသုံးသူများ၏ပြproblemနာအတွက်အဖြေသည်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြီးမြောက်စေရန်၎င်းတို့အတွက်အရှိဆုံးမက်လုံးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသေချာသည် - အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအတွေ့အကြုံများသည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။ (စားသုံးသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုရရှိရန်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်သည်။ ) သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းသည်၎င်းတို့အား ၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်တန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုချက်ချင်းရယူလျှင်ဆိုလိုသည်မှာ အချိန်ပို။ ပြီးတော့ငါတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်မက်လုံးပေးချင်တာကမင်းသူတို့ကိုလိုချင်တာမှန်သမျှပဲ။ သင်၏နှလုံးသားဆန္ဒရှိပါက၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး၊ အကဲဖြတ် (သို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာ)၊ ကူပွန်သို့မဟုတ်လျှော့စျေး၊ e-book ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သူက ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုစေပါစေ၊ static lead ပုံစံသည်တူညီသောပုံစံနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်နေလိမ့်မည်။ သင်၏အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာဖြည့်ရန်နေရာရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအတွက်နေရာလည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ခဲခဲပုံစံများ၏အပြည့်အ ၀ အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသင်မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုဖမ်းယူရန်ရေယာဉ်ဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံများသည်၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံများသည်သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရုံသာမကသင်၏စားသုံးသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ သင်ဖန်တီးသောအတွေ့အကြုံများကိုတစ်ခုတည်းသောသတ်မှတ်ချက်မှာတန်ဖိုးရှိသောတစ်ခုခုကိုကတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လျှော့စျေးတစ်ခု၊ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးတစ်ခု၊ သိမ်းဆည်းမှုဝင်ခွင့်များ - သင်၏စားသုံးသူအခြေစိုက်စခန်းကိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြီးမြောက်စေရန်လုံလောက်သောအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံအမျိုးအစား (နှင့်မေးခွန်းများကိုစိတ်ကြိုက်) နိုင်ခြင်းအပြင်, အခြားအေးမြသောအရာသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏အသွင်အပြင်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အရောင်ခြယ်မှုမှသည်ပုံရိပ်များနှင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာအမှတ်တံဆိပ်သည်ဖန်တီးသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်လုံးဝကိုက်ညီသည်။ သင်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ခဲပုံစံများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းထက်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားတရားဝင်အောင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကဘာလဲ။ စားသုံးသူသည်သတင်းအချက်အလက်သည်သင့်ဆီသို့တိုက်ရိုက်သွားသည်ကိုသိရုံသာမကသူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကသူတို့တောင်းသည့်အတိုင်းအတိအကျရရှိရန်အကြံပေးလိမ့်မည်။
ငါကြိုးစားနေတာကဒီအတွေ့အကြုံအမျိုးအစားအားလုံးဟာစိတ် ၀ င်စားစရာပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားစာသားရိုက်ရန်သာခွင့်ပြုသည့်ရှင်းလင်းသောပုံစံမဟုတ်ပါ။ စားသုံးသူများသည်“ နံရံတစ်ခုနှင့်စကားမပြော” တော့ပါ။ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်စားသုံးသူများထံမှတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်ပြီးစုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်ပေါ် မူတည်၍ တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ငြိမ်ခဲဖောင်ပုံစံကမလုပ်နိုင်ပါ။
တည်ငြိမ်သောခဲပုံစံများသည်စားသုံးသူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကလူကြိုက်များသောနည်းလမ်းမဟုတ်သော်လည်း ၄ င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ထိုပုံစံများကိုပါးရိုက်ရန်ရွေးချယ်သောကုမ္ပဏီများစွာရှိသည်။ အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အမှတ်တံဆိပ်အရေအတွက်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များကြားထင်ရှားပေါ်လွင်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ရှင်းနေသည်ကိုဖော်ပြကြပါစို့။ လူတိုင်းက ၄ င်းတို့၏ ဦး ဆောင်ဖမ်းဆီးခြင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုအသုံးချနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အတွေ့အကြုံမျိုးကိုမဆိုသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ထားပါကသင်၏စားသုံးသူများနှင့်ချက်ချင်းထင်ရှားလိမ့်မည်။ ပုံမှန် static ပုံစံကိုဖြည့်ပြီးတုန့်ပြန်မှုကိုစောင့်နေမည့်အစားသူတို့သည်မေးခွန်းများနှင့်တန်ဖိုးရှိသောအရာများကိုဖြေဆိုကြသည်။ တစ် ဦး တည်းအတွေ့အကြုံအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သောခဲပုံစံများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းကိုမမေ့သင့်ပါ။ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သောခဲပုံစံ၏ခြုံငုံကြည့်မှုသည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်တွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေရုံသာမကအမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံ (အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ပဟေquိများ၊ ဂိမ်းများစသဖြင့်) သည်အမှတ်ရစရာဖြစ်ပြီးသင်၏ပြိုင်ဘက်များကလည်းဖြစ်နိုင်သည် ' လုပ်နေတာ ... သေး
၆။ Static Lead Form များသည်လိုအပ်သောဒေတာဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများလိုအပ်သောပမာဏကိုမဖမ်းယူနိုင်ပါ
static lead ပုံစံတွင်သင်တွေ့ရသောအသုံးအများဆုံး field တွေကဘာတွေလဲ။ အမည်၊ ဖုန်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စုံစမ်းရေးအမျိုးအစား (များသောအားဖြင့်မိုးရေကျဆင်းခြင်း) နှင့်တစ်ခါတစ်ရံမှတ်ချက်များနှင့်မေးမြန်းမှုများအတွက်နေရာတစ်ခု။ ၎င်းသည်အချက်အလက်အားလုံးအတွက်မဟုတ်ပါလော။ စားသုံးသူတစ် ဦး ၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်ကထိုစားသုံးသူကိုထူးခြားစေသည့်အရာအားထိုးထွင်းသိမြင်မှုမပေးပါ။ စျေး ၀ ယ်မှု ဦး စားပေးမှုများ၊ စျေးဝယ်မည့်အချိန်၊ တည်ငြိမ်သောခဲပုံစံများနှင့်ပတ်သက်သည့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်သင်သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုသောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စားသုံးသူများကိုမေးခွန်းမမေးနိုင်ပါ။
မည်သည့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်ခဲသတ္တုအမျိုးအစားများသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်မေးခွန်းနှင့်မေးခွန်းအားလုံးကိုလုံး ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ စားသုံးသူသည် ၀ ယ်လိုသည်ကိုဝယ်ယူရန်စိတ် ၀ င်စားခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ငွေကြေးရွေးချယ်စရာများအကြောင်းလေ့လာလိုပါကသင်ပိုမိုလေ့လာလိုပါကသင်လုပ်ရမည့်အရာမှာမေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏သုံးစွဲသူများ၏ဤတိကျသောမေးခွန်းများကိုမေးရန်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင်၏ (ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်) ကိုသင်၏စားသုံးသူအခြေစိုက်စခန်းအကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်နောင်တွင်မည်သို့စျေးကွက်သို့တင်ပို့ရမည်ကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကိုကူညီခြင်းအပြင်သင့်အရောင်းအဖွဲ့သည် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) တစ် ဦး ချင်းစီကိုလက်ခံရရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုတစ် ဦး ချင်းအဆင့်အထိစီစစ်နိုင်သည်၊ စားသုံးသူပရိုဖိုင်းများကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့၏နောက်ဆက်တွဲများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထူးခြားသောမေးခွန်းများမေးနိုင်ခြင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားသတင်းအချက်အလက်နှင့်စိတ်ကိုထိပ်ဆုံးသို့ရောက်စေရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ စားသုံးသူတစ် ဦး သည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံများပြီးစီးပြီးနောက် (သူတို့၏အကဲဖြတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လျှော့စျေးစသည်တို့ဖြင့်သူတို့၏မက်လုံးများကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်) သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်။ မ။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလာရောက်စားသုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုအကဲဖြတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်၏ကုန်သွယ်မှု၏တန်ဖိုးကိုသင်ရရှိသည်။
အခုဘာလဲ ကောင်းပြီ, ထိုအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသူတို့သေချာစေရန်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ် ဖမ်းယူအော်တိုဆောင် သူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးကနေအများဆုံးတန်ဖိုးရတဲ့။ ဒါဟာအပိုဆောင်းအပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံရွေးချယ်စရာများ၏ပုံစံအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်“ အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်အသစ်” ကို ၀ ယ်သင့်၊ မသင့်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းများရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အတွေ့အကြုံကိုရွေးချယ်ပါစေ၎င်းအချက်အလက်များသည်စားသုံးသူများအနေဖြင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုအမှန်တကယ်စဉ်းစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါ့အပြင်လုံးဝရိုးသားကြပါစို့ - သူတို့တွေဟာစိတ်သဘောထားတွေများလေလေအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်လာလေလေသင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရိုးရှင်းစွာမှတ်မိဖို့စားသုံးသူပိုများလေပဲ။
Tags: interactive အကြောင်းအရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောစျေးကွက်interactive မီဒီယာခဲပုံစံများခဲပုံစံများကိုသေပြီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများPERQစမတ် CTAs
ကျွန်ုပ်တို့၏ Domain ကို Marteb.zone သို့ပြောင်းလဲပြီးဘာကြောင့်ပြောင်းလဲပေးတာလဲ
ဇန်နဝါရီ 30, 2017 မှာ 9: 09 AM
ကျနော်တို့လုံးဝဒီမြင်ကြပြီ အကဲဖြတ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောစာမျက်နှာများသည် static ပုံစံများကို spam ထောင်ချောက်များသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဆောင်းပါး
30:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 04
မင်းမှာဒီဥပမာကောင်းရှိလား။ ငါအမှတ်ကောင်းစွာလုပ်နှင့်အလေးချိန်ရှိကြောင်းထင်ပါတယ်။ သို့သော်မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားရန်၊ ပုံစံ ၃ ခုကိုသင်ဖြည့်ရမည်။ #ironic 🙂
30:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 09
အကောင်းဆုံး မှတ်ချက် အမြဲတမ်း
မတ်လ 1, 2017 မှာ 10: 10 AM
သတင်းအချက်အလက်ဆောင်းပါး! အများကြီးတန်ဖိုးထား။ သို့သော်ဥပမာပေးသည့်အခါသတိပြုပါ။ “ မင်းမှာကလေးရှိသလား” လို့မေးတဲ့တိုက်ခန်းအသိုင်းအဝိုင်း။ ဖက်ဒရယ်တရားမျှတသောအိမ်ရာအက်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်လိမ့်မည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်မိသားစုအဆင့်အတန်းသည်အကာအကွယ်ပေးထားသောအတန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
မတ်လ 1, 2017 မှာ 10: 14 AM
ကောင်းတဲ့အချက် - အဲဒါကိုအသိပညာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။